I-A3 6 Umbala Wezembatho I-Printer Tshirt China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-DIY Textile,Iphrinta yeThtile yeThemtile,Umshini wokunyathelisa we-Textile weMbala
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinti yeThetile > I-A3 6 Umbala Wezembatho I-Printer Tshirt
Singumshini wephrinta we-multi-function flatbed iphrinta, ithimba lethu loMnyango Wezobunjiniyela linemiphumela engaphezu kweminyaka eyishumi yokusebenza. Le A3 6 Color Textile Printer Tshirt iyinhlangano evumelwane kakhulu kusukela ekutholeni ibhizinisi. Siyakha iphrinta le- Textile T Shirt ukuphrinta ngezinhlobo eziningi
textile, njengendwangu, ukotini, indwangu, izicathulo, isikhwama sokuthenga, i-jeans. Kungasiza u Abomabhizinisi bakha ibhizinisi labo maduzane. Bangayithatha njenge- DIY Textile Printer, ifika ngembala engu-6 inkinobho C, i-Magenta , i-Y Yellow, i-Black, i-White. Ubizwa nangokuthi Umshini Wokunyathelisa we-6 we-Textile.
Iphrinta yeThtile yeThemtile
Umshini Wokunyathelisa Wezitolo Zama wholesale Diy Logo Xhumana Nanje
Iphrinta ye-DIY Textile Iphrinta yeThtile yeThemtile Umshini wokunyathelisa we-Textile weMbala Iphrinti yeThetile Iphrinta yeThetile A3 Iphrinta ye-CD Best Iphrinta ye-Textile eqondile Iphrinta ye-CD eNigeria